News Archives - Smart Trading Nepal
यस्तै गल्तीले हुनसक्छ तपाईंको कानको समस्या कसरि समाधान गर्ने पढ्नुहोस पुरा…..
शहरमा बस्नुहुन्छ भने, तपाईं धुलो, धुँवा र चर्को ध्वानीको घेराबन्दीमा हुनुहन्छ । यसको सोझो असर तपाईंको कानमा परिरहेको छ । अर्थात अरुको कारण तपाईंले आफ्नो श्रवणशक्ति गुमाइरहनुभएको छ । शहरमा हुनुहुन्न भने पनि तपाईं मोवाइलका प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ । मोवाइलमा कुरा…
ग्रीन टि पिउने हो ? जान्नुहोस् है यी कुरा…..
जब घरमा आगन्तुक आइपुग्छन्, भन्ने गरिन्छ, ‘ल चिया पिउँ ।’ तर, आगन्तुकको डिमान्ड फरक हुन्छ । भन्छन्, ‘ग्रीन टि भए अझ राम्रो ।’ हामीले भन्ने ‘चिया’, जसमा दुध, चिनी मिश्रण गरिएको हुन्छ । चिया चाहि दानादार अर्थात सिटिसी । दुध,…
पोलेको सुँगुरको मासु, खसीको सेकुवा खानुको विछट्टै स्वाद छ । तर, हालैको एक अध्ययनले यो स्वादलाई केही खल्लो बनाउन सक्छ । अध्ययनले भन्छ, कुनैपनि खानेकुरा कोइलामा पोलेर खाँदा त्यो निकै विषाक्त बन्न सक्छ । हाम्रो जिब्रो पोलेको खानेकुरामा लोभी छ…
नेपालमा क्यान्सर रोग दिन-प्रतिदिन बढ्दो छ । बदलिँदो जीवनशैली, गलत खानपान, धुँवाधुलोको प्रदुषण तथा सूर्तीजन्य पदार्थका कारण नेपालमा वर्षेनी हजारौं मानिसलाई क्यान्सर लाग्ने गरेको छ । झण्डै बीस हजारको हाराहारीमा नेपालमा क्यान्सर रोगीहरु रहेको अनुमान छ । नेपालमा क्यान्सर रोगको…
वायु प्रदुषणका कारण हुने मृत्युदर नेपालमा दक्षिण एसियाकै उच्च
५ बैशाख, काठमाडौं । दक्षिण एसियामा वायु प्रदुषणको कारण हुने मृत्युदर नेपालमा सबैभन्दा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । साथै वायु प्रदुषण पनि उच्च छ । हेल्थ इफेक्ट्स इन्ष्टिच्युट र इन्ष्टिच्युट फर हेल्थ मेटि्रक्स एण्ड इभ्यालुएसनले युनिभर्सिटी अफ बि्रटिस…
Beijing region sees record breaking drop in winter air pollution
Air quality in the Beijing region was better in November than any previous winter month on record, data shows. It comes after the government startedamajor shutdown of cement and steel plants, inabid to fend off winter…
Sales of diesel-powered cars fell dramatically last year, declining more than 17% compared with 2016. People within the industry blame anti-diesel rhetoric from the government, local authorities and clean air campaigners for eroding consumer confidence. They insist that modern diesel…
तरकारीमा मन्दविषः किरा मार्न प्रयोग हुने विषादि सीधै भान्सामा
८ मंसिर, काठमाडौं । बेमौसमी तरकारी खेतीको प्रचलन बढ्दै जाँदा रोग, किरा लाग्न नदिन विषादी प्रयोग पनि व्यापक छ । त्यस्ता विषादिले मानव स्वास्थ्यमा मन्दविषको काम गरिरहेको विज्ञहरु बताउँछन् । कृषि विकास मन्त्रालयअन्तर्गत बाली संरक्षण निर्देशनालयको तथ्यांक हेरौं । हरेक…
प्रदुषण फेल भएका ३८ सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको नियन्त्रणमा
काठमाडौं उपत्यकामा प्रदुषण हुनुको कारण सवारी साधन पनि मानिन्छ। उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनको धुँवाबाट ३८ प्रतिशत वायु प्रदुषण हुँदै आएको केही वर्षअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। सवारी साधनबाट निस्कने धुँवाले मानव स्वास्थ्यमा निकै खतरा गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले…
सन् २०१५: प्रदूषणका कारण ९० लाखको मृत्यु
एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले सन् २०१५ मा विश्वभर प्रदूषणसँग सम्बन्धित ९० लाख अकाल मृत्युका घटना भएको जनाएको छ। ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनले विश्वभर प्रदूषणसँग सम्बन्धित मुटु रोग र मस्तिष्कघातसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरिएको जनाएको छ। प्रभावित प्रदूषणसंग सम्बन्धित अकाल मृत्युका…